कतारमा शून्य लागतमा ‘फ्री भिसा-टिकट सहित् एक कम्पनीले माग्यो नेपाली कामदार, यस्तो छ तलब सुबिधा ! – नेपाली संगसार
Home रोजगार कतारमा शून्य लागतमा ‘फ्री भिसा-टिकट सहित् एक कम्पनीले माग्यो नेपाली कामदार, यस्तो छ तलब सुबिधा !
रोजगार नेपाली संगसार	· June 6, 2021 ·0Comment
काठमाडाैं । कतारको एक कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली कामदारको माग गरेको छ । दोहा सहरमा रहेको structural technical services and contractig कम्पनीले painter का लागि १५ नेपाली कामदारको माग गरेको हो । योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ ।